Dresses amin'ny fety ho an'ny vehivavy
Raha efa eo am-piandrasana ilay fialantsasatra, ny tovovavy dia tsy mahatsapa afa-tsy ny fihetseham-po mahafinaritra, fa manahy ihany koa amin'ny fisafidianana ny akanjo. Ny fividianana akanjo hanaovana fety iray ho an'ny vehivavy dia tantara iray manontolo ahitana safidy amin'ny fomba, loko, fitsangatsanganana, ary fitting.
Inona no tokony hataon'ny fialan-tsasatra ho an'ny vehivavy?
Ny modely an-tsehatra, matetika, dia mamaritra ny toetoetry ny hetsika:
Mandeha any amin'ny orinasa, zava-dehibe ny tsy manadino izany. Etsy andaniny, mila mampiseho amin'ireo lehibeny sy mpiara-miasa aminao ianao fa azonao ny maha-zava-dehibe an'io zava-mitranga io, ary ny iray hafa dia aza adino izany na amin'ny iray hafa, mbola ao anatin'ny fiaraha-miasa ianao. Ny safidy tsara indrindra amin'ny akanjo hanaovana fialan-tsasatra ho an'ny vehivavy amin'ity tranga ity dia mety ho "raharaha". Ny akanjon'ny akanjon'akanjo dia tsy niboridana, nisintona kiraro tsara tarehy, nametraka ny firavaka tany am-boalohany, fantaisize tamin'ny lokon'ny akanjo.
Amin'ny fampakarambadin'ny namana iray, amin'ny fety iray, afaka miara-milamina tsara ny modely fanao amin'ny akanjo fety ho an'ny vehivavy. Ohatra, ny tompon'ny endrika tsara iray, aza afenina ny fahamendrehany, fa ny mifanohitra amin'izany, mila mampiseho azy ireo ianao amin'ny fampiasana akanjo fohy. Fomban-tany lava be amin'ny lokony, miaraka amin'ny ravina, miaraka amin'ny tandroka manify, asymmetrika lavany.
Fiakanjo manetriketrika ho an'ny vehivavy, natao ho an'ny raharaha lehibe kokoa - ny lanonana handraisana, ny fampakaram-bady mety dia tokony hifanaraka amin'ny lanjan'ny hetsika. Azonao atao ny manandrana ny fomba "mermaid", manandrama amin'ny fomba retro . Aza hadino ny kiraro amin'ny kiraro avo sy ny kitapo matevina.
Fiakanjo fialan-tsasatra ho an'ny vehivavy matavy
Ankehitriny, ny olana amin'ny fividianana akanjo ho an'ny ravina pysachek. Ao amin'ny magazay dia afaka mahita modely tena mahaliana sy mahafinaritra ianao, ary akanjo fitafy ho an'ny vehivavy matavy dia tsy fitafiana tsy misy endrika. Mijery tsara tarehy amin'ny endrika akanjo vehivavy iray amin'ny fomba grika - maimaim-poana, fa manantitrantitra ny endriny. Hahazo tombony azo antoka ihany koa ny akanjo vita amin'ny decollete. Eo am-pelatanan'ny vehivavy tsara tarehy dia samy manana ny halavany, ny vala.
Pareos ho an'ny tora-pasika - mahafinaritra ny mifatotra sy lamaody?
Lamina lava ho an'ny andro tsirairay
Mpivarotra ririnina ho an'ny vehivavy
Blouses avy amin'ny chiffon - modely tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra
Fashion - ririnina 2016-2017
Ireo avocados avy amin'ny taolana ao an-trano, ny hafanana amin'ny fambolena sy ny fambolena
Kalanchoe - fananana medikaly
Fanamboaran-trano fanorenana - hevitra mahaliana
Jane Fonda dia nankalaza ny daty nahaterahana tamin'ny fanomezana goavana ho an'ny mahantra
Wedding Dresses - Summer 2014
Iza no tsara kokoa: 15 amin'ireo mpidoroka vazivazy sy vahiny!
Kitapo mavo amin'ny lohan'ny zazakely
Pumpkin Lodge amin'ny tananao
FKA Twigs dia nanolotra clip mainty sy fotsy ho an'ilay hira Good to Love